Icardi oo seegay tababarka PSG, haweeneyda ka dambeysay inay xaaskiisa kala tagaan oo la ogaaday & laacibka oo xaalad taas ka duwan muujinaya – Gool FM
Ahmed Nur October 18, 2021
(Paris) 18 Okt 2021. Laacibka kooxda Paris Saint-Germain ayaanan ka qayb galin tababarkii kooxdiisa ee shalay kaasoo ay isugu diyaarineyso ciyaarta Champions League ee ay habeen dambe la ciyaari doonto kooxda RB Leipzig kaddib markii la wariyay inay kala tageen xaaskiisa Wanda Nara inkastoo uusan isaga xaqiijin.
Sababta kala tagitaanka lammaanahan ayaa la warinayaa inay ka dambeysay kaddib markii Icardi uu xiriir hoose la sameeyay atariishada model-ka ah ee China Suarez sida uu Wanda u sheegay qof ka mid ah dadka ku xiran barteeda Instagram kuwaasoo ka jawaab celinayay qoraal ay qaybta ‘Story-ga’ soo dhigtay kaasoo si maldahan ugu qotomay kabtankii hore ee Inter Milan.
Si kastaba ha ahaatee, majaladda Faransiiska kasoo baxda ee L’Equipe ayaa sheegtay in xaaska Icardi ay xitaa ka tagtay magaalada Paris iyadoo kaxeysatay saddexdeeda canug xilli Sabtidii ay ‘Unfollow’ barteeda Instagram ka dhahday seygeeda.
Dhinaca kale, waxaa soo if-baxay sheeko aan xoogganeyn oo ka soo horjeedda arrinta la wariyay ee kala tegitaanka maadaama uu weeraryahanka reer Argentina uu bartiisa Insatgram soo dhigay sawirro uu kula jiro xaaskiisa iyo wakiilkiisa Wanda inkastoo aysan sawirrada ahayn kuwa cusub.
Waxaa intaas dheer, in Icardi uu bartiisa ugu hambaleeyay xaaskiisa maalinta hooyada taasoo dalka Argentina looga dabaal-dagayo balse taas caksigeed, Wanda ayaa barteeda Instagram soo dhigtay qoraallo iyo sawirro dhowr ah kuwaasoo aanan midna quseyn Icardi.
Haddii ay sheekada kala tagitaanka run tahay, isla markaana ay u sabab tahay xiriirka uu Icardi la sameeyay China Suarez, waxaa loo arkaa sawirrada uu haatan soo dhigayo kuwa raalli gelin ah inkastoo aysan saaxiibbo ku ahayn barta Instagram oo hadal heynta abuurtay.